Ilay zanaka adala: tsiambaratelon'ny Baiboly [hita]?
Ny fanoharana ilay zanaka adala ao amin'ny Malagasy ao amin'ny Filazantsara araka ny Lioka ao amin'ny toko 15 andininy 11 ka hatramin'ny 32.
Misy mitantara ny tantaran'ny raim-pianakaviana iray izay manan-janaka roa, ary manapa-kevitra ny hanontany izay mifanaraka amin'ny lovany.
Mandeha an'izao tontolo izao io tovolahy io ary, miaraka amin'ny namana sasany, dia mandany an'io vola rehetra io izy.
Rehefa tsy manana na inona na inona izy, namela azy irery ny sakaizany, dia tonga eny an-dalambe izy nefa tsy mahalala izay tokony hatao.
Nanapa-kevitra ny hitady asa izy ary niafara-karama ho mpiasa mpiasa iray ary rehefa nahatsapa ny fahadisoany izy ary nandray fanapahan-kevitra lehibe dia ny hiverina any an-tranon-drainy.
Nony tonga teo anoloan-drainy ilay tovolahy dia niarahaba tamim-pifaliana, nanapa-kevitra ny hanao fety ilay lehilahy satria niverina ny zanany. Niova ny akanjon'ilay tovolahy ary nomena peratra vaovao izy.
Voavela ny helok'ity tovolahy ity ary tamin'io andro io dia nankalaza fety lehibe izy ireo ho fanomezam-boninahitra azy.
Iray amin'ireo tantara malaza indrindra hitantsika ao amin'ny soratra masina izany ary mamela antsika fampianarana manan-danja toy ny fibebahana sy ny fitiavana ny Ray ho antsika.
1 Fibebahana rehefa very ny zava-drehetra
2 Ny Ray izay mankalaza ny fiverenan'ny zanany lahy
3 Ilay zanaka adala: ny toe-tsaina no mahatonga ny fahasamihafana ...
3.1 Ny fihetsiky ny ray:
3.2 Ny fihetsiky ny zanaka adala:
3.3 Ny toe-tsain'ilay zokiny:
Fibebahana rehefa very ny zava-drehetra
Ny fieritreretana ny fibebahana ilay zanaka adala dia tsy azo atao tsotra satria mila dinihina ny lafiny manan-danja sasany.
Imbetsaka isika no mieritreritra fa ity dia momba ny zaza iray manan-danja izay nangataka ny volany rehetra ary rehefa avy nandany ny zava-drehetra izy, dia nanapa-kevitra ny hiverina, fa any eny lalindalina kokoa ny tantara izany ary mamela antsika lesona izay mety hitondra soa betsaka ho an'ny fiainantsika.
Voalohany, tokony ho fantatsika fa mpanota daholo isika, ary rehefa teraka isika dia efa mitondra izany fototry ny ota izany ary rehefa mihalehibe isika dia misy zavatra maro ataontsika izay manosika antsika lavitra sy lavitra lavitra ny Raintsika any an-danitra.
Tahaka ny zanaka adala, omen'Andriamanitra fiainana sy izay rehetra ilaintsika mba hivelomany tanteraka ary lanintsika izany amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena azy amin'ny fanaovana zavatra hafa ary, amin'ny tranga ratsy indrindra, ny fanaovana ratsy, manimba ny mpiara-monina sy ny hafa. fitondran-tena izay tsy tsara ho antsika.
Ny fiainana ota dia miova rehefa mibebaka isika, rehefa afaka manova ny fisainantsika ary manapa-kevitra ny hanana fiainana tsara.
Tsy midika kosa izany hoe ho lasa lavorary isika, fa hiezaka ny hanaraka miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary honina eo akaikin'ny Ray isika.
Tahaka ilay zanaka adala, dia nandany ny fiainantsika tamin'ny zava-dratsy isika ary fotoana tokony hiverenantsika amin'ny Ray, hibebaka amin'ny fahotantsika.
Iray amin'ireo fampianarana nolavin'ity fanoharana ity izany; Raha mibebaka isika dia hahita ny famelan-keloka avy amin'ny Ray.
Ny Ray izay mankalaza ny fiverenan'ny zanany lahy
Ity dia fampianarana mahaliana satria matetika isika mieritreritra fa ny zavatra nataontsika dia tsy mendrika famelan-keloka avy amin'Andriamanitra.
Na izany aza, isika rehetra dia afaka manatona ny Ray ary mangataka famelana ny fahotantsika.
Ny tenin'Andrimanitra dia manantitrantitra amin'ny andalana maromaro, fa rehefa misy mpanota mibebaka any an-danitra dia misy fety, fa ny fitiavana nomen'ny Ray antsika dia lehibe noho ny ratsy rehetra nataontsika.
Ny zava-dehibe dia ny manolotra ny tenantsika eo anoloan 'ny razanay tena mibebaka.
Tahaka ny nataon'ilay zanaka adala dia tsapany fa tao an-tranon-drainy no nananany izay rehetra nilainy ary tsy momba ny vola izany fa momba ny fahatsapana ho voaro, tiana ary, mihoatra ny rehetra.
Isika rehetra, amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainana, nahatsapa hoatran'ity tovolahy ity, dia mahatsapa fa tsia Tsy misy olona tia anay sy handray anay amin'ny sandriny misokatra ary amin'ity fampianarana ity dia afaka mahita isika fa ny ray any an-danitra dia tia antsika amin'ny fitiavana lehibe ka manarona fahotana maro izany.
Ny fibebahana marina dia mitondra antsika manatona an'Andriamanitra bebe kokoa.
Ny fahafantarana ny fahadisoantsika ary mangataka famelana amin'ny fahotantsika dia zava-dehibe nefa sarobidy kokoa rehefa rehefa miala tsiny marina isika.
Ny raim-pianakaviana any an-danitra dia naneho fitiavana ny zanak'olombelona hatramin'ny nanombohan'ny famoronana dia afaka mahita ny fitiavantsika azy isika rehefa manokatra ny masontsika isa-maraina ...
Rehefa mifoka rivotra isika rehefa afaka manao hetsika sasany, rehefa mahita ny natiora dia maneho ny fitiavan ny ray ny zanany ary ireo izay tena mibebaka ihany no afaka miantso ny tenany ho zanak'Andriamanitra, na dia tsy ataontsika aza dia zavaboarin'Andriamanitra fotsiny isika.
Ilay zanaka adala: ny toe-tsaina no mahatonga ny fahasamihafana ...
Ao amin'ity tantara ity dia ahitantsika fihetsika telo izay tsy maintsy raisintsika ary hodinihintsika tsirairay ireo mba hahafahantsika maka izay rehetra azo atao.
Ny fihetsiky ny ray:
Izy dia raim-pianakaviana tokana izay nitaiza ny zanany roa samy mitondra tombony ho an'ny tsirairay avy. Fianakaviana manana fijoroana tsara ary efa manan-janaka roa eo amin'ny sehatra iray hahafahan'izy ireo mandray ny fanapahan-keviny manokana.
Tsy mora ny nandrenesan'ny razana tamin'ny vavan'ny zanany lahy izay zandriny mirahalahy, fa te hankafy ny lovany.
Nahazo sy nampionona ilay raim-pianakaviana, mahalala ny hanekena ny fangatahan'ny zanany lahy ary manaja azy na dia mandratra aza izany. Ara-drariny fotsiny izy satria nanolotra ny zavatra nangatahiny feno, nefa tsy naka na inona na inona.
Ny fihetsiky ny zanaka adala:
Amin'ny voalohany isika mahita zanaka lahy mirehareha, izay tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany. Toa tsy miraharaha ny fihetseham-pon-drainy izy ary manapa-kevitra ny hiala tsy hankafy fiainana miaraka amin'ny naman'ireo namana nandao azy rehefa nahita ny tenany tsy nitondra na inona na inona.
Nikomy ny zanaka adala fa hitantsika fiovana lehibe izany ary rehefa tonga ny fibebahana. Ny fanovana toe-tsaina, manatona ny raim-pianakaviana, miala tsiny ary mankasitraka.
Ny toe-tsain'ilay zokiny:
Azo antoka fa tsy mora ny nahita ny fahavoazana nanjo ny zandriny lahy tamin'ny fianakaviany.
Nahazo ny lovany koa izany, mitovy habe izay nomena ny rahalahiny. Na izany aza dia nanapa-kevitra ny hijanona izy. Nahatezitra ny fihetsiny, nahita ny zava-nitranga tamin'ny rahalahiny.
Nasehony tsy nisy fifaliana tamin'ny mpandova koa izany, toetra tsy firaharahiana ilay izy. Ilay zokiny indrindra dia zanaka tsara, saingy tsy rahalahy tsara izy.
Ireo fihetsika telo ireo dia avelao hianatra zavatra betsaka. Raha ray aman-dreny isika, ny zavatra tadiavintsika dia ny mahita ny zanatsika faly ary noho io, indraindray, tsy maintsy milaza isika tsia.
Amin'ny maha zanaka adala, na dia tsy ny tsara indrindra aza ny toetrantsika dia afaka miverina any amin'ny ray foana isika ary mibebaka. Amin'ny maha-zokiolona antsika, dia tsy maintsy manahy momba ny maha-rahalahy tsara antsika koa isika.
Fenoy famindram-po amin'ny mpiara-belona aminay izahay ary asio fangoraham-po bebe kokoa amin'ny fotoana rehetra.
Tianao ny lahatsoratra momba ilay zanaka adala?
Lee koa fivavahana amin'ny ran'i Kristy ary ity vavaka ho an'ny Trinite Masina.
Ny fanomezan'ny Fanahy Masina
Vondrona vondrona WhatsApp Venezoelà